वामदेव कामरेड ! ‘मोहरा’ कहिलेसम्म
घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, १८ फागुन
अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तानातानीको दृश्य खुब रमाइलो देखिन्छ । खासमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुव्र्यवहार आरोपमा जेल पठाइएपछि नवसंयोजित २ पार्टी पूर्वनेकपा एमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका बीच एकअर्कालाई ‘पत्तासाफ’ गराउने खेल बेजोडले भइरहेको देखिन्छ ।
नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का विश्वासपात्र र निकट सहयोगी रहेका महरालाई बदनाम गराएर सभामुखबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारिएपछि पूर्वमाओवादी त्यस खेललाई पूर्वएमालेको ‘षड्यन्त्र’का रूपमा हेरिरहेको छ । र, पूर्वमाओवादी पक्ष पनि पूर्वएमाले पक्षलाई अर्थात् अर्का पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यसकै परिणाम हुन्, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँ कमिसन प्रकरण र अहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको ‘अंश’ प्रकरण ।
करिब दुई तिहाइ समर्थनको बलियो सरकारलाई सशक्त बनाउन नेकपाले सकेको छैन । विगतमा अर्थात् २०४८ सालमा बनेको कांग्रेसको एकमना अर्थात् स्पष्ट बहुमतको सरकार पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण ३ वर्षमै ढालियो र मध्यावधिमा देशलाई होमियो ।
परिणाम– कांग्रेस अल्पमतमा त प¥यो नै देश पनि हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेलियो । त्यसको दुर्नियति १० वर्षसम्म निरन्तर आमजनले भोग्नुप¥यो भने त्यसकै बाछिटा अझै बाँकी रहेकाले समय समयमा देश र देशवासीले तनाव व्यहोरिरहनुपरेको अवस्था विद्यमान छ ।
अहिले सत्तारुढ नेकपामा देखिएको किचलो र एकले अर्कालाई ‘खुइल्याउने’ खेलले अन्ततः विगतको यही नियति दोहोरिने त होइन ? भन्ने आशंका अस्वाभाविक पनि होइन ।
कतिपय विश्लेषकको राय छ कि वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अत्यन्तै चलाख र आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई ‘भित्तामै पु¥याउने’ खतरनाक सोचका व्यक्ति हुन् । आफ्नो भलो नदेखेपछि उनले पनि २०५१ सालमा गिरिजाप्रसादले हिँडेकै बाटोमा अर्थात् संसद भंग गरेर मध्यावधिमा देशलाई जाक्ने बाटोमा नहिँड्लान् भन्न नसकिने उनीहरूको बुझाइ छ ।
उसो त राष्ट्र प्रमुखलाई ‘आलङ्कारिक’बाट ‘सक्रिय’मा रूपान्तरण गरेर विस्तारै ‘निरङ्कुशता’को बाटोमा हिँड्न पनि ओली पछि पर्दैनन् भन्ने तर्क पनि खासै कमजोर होइन यद्यपि, यो सम्भावना भने न्यून नै छ ।
उता, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्रका ‘कार्यकारी’ बन्ने रहर त्यतिकै गरेका होइनन् भन्ने सामान्य व्यक्तिले समेत बुझ्ने कुरा हो । उनी १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएका व्यक्ति हुन् । उनलाई शक्ति र सत्ताको स्वाद राम्ररी नै थाहा छ ।
यस्तै ‘खिचातानी’का बीच केही समयअघि जन्मियो, भैँसेपाटी गठबन्धन । केपी ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न र शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न प्रचण्डलगायत असन्तुष्ट पक्षहरू माधव नेपाल वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल आदि सम्मिलित उक्त गठबन्धन ओलीका लागि निकै सकसपूर्ण हुने देखिएको छ ।
यस गठबन्धनकै असर अहिले देखिएको हो । उक्त भेलामा सभामुख माओवादी पक्षलाई दिलाउने, वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा ल्याएर संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्ने र वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेलगायतका निर्णय भएका बाहिर आएको छ ।
यसमा सभामुख पूर्वमाओवादीबाट बनाउने विषय सफल भइसकेको छ भने अब वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने विषय बाँकी छ ।
यही खेलको हारजीतमा लागेको छ अहिले नेकपा । केही दिनअघि सम्पन्न सचिवालय बैठकले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय ग¥यो तर एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको खबर आयो ।
ओलीको उक्त भनाइप्रति नेकपाभित्र र बाहिर पनि निकै आलोचना भयो । पार्टी सचिवालयको निर्णय मान्दिनँ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व सायद केपी ओली नै होलान् । तथापि, उनी आफ्नै भनाइका कारण निरन्तर भड्खालोतिर पर्दै गएका छन् । एकपछि अर्को भड्खालोबाट बचेर हिँड्न ओलीलाई अहिले निकै गाह्रो छ ।
यसैबीच गत ११ फागुनमा ओलीले आफ्नो जन्मघर तेह्रथुममा मनाएको जन्मदिनले समेत उनलाई निकै विवादित बनायो । लाखौँ रुपैयाँ राज्यकोष दुरूपयोग गरेर मनाइएको उक्त जन्मदिनमा नेपालको नक्सा अङ्कित केक काटिएको प्रसंग पनि विवादित नै बन्यो ।
यी यावत् विवाद र आलोचनासँगै आफ्नै पार्टीभित्रसमेत अल्पमतमा परेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद जोगाइराख्ने चुनौती झनै बढेको छ । ‘सम्झौता’ त पूरै कार्यकाल अर्थात् ५ वर्ष नै ओलीले सरकार चलाउने, पार्टीको कार्यकारी प्रचण्ड बन्ने भन्ने नै भएको भनिन्छ तर ओलीले भने दुवैतिर अर्थात् सरकार र पार्टीमा पनि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप जारी नै राखेका छन् । यस कारण प्रचण्ड र असन्तुष्ट पक्ष ओलीप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् ।
यसैका कारण ओलीविरुद्धका गठबन्धनहरू बन्ने र भत्किने अनि फेरि बन्ने क्रम जारी छ । तर, परिणाममा भने यी गठबन्धनको नतिजा प्रस्ट देखिन सकेको छैन ।
उसो त वामदेवलाई ‘मोहरा’ बनाएर यता प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि खेलिरहेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि अनौठो होइन । केही समयअघि अर्थात् प्रचण्ड पार्टीमा ‘कार्यकारी’ भनिनुअघि माधव नेपाल नै पार्टीका वैकल्पिक केन्द्र थिए । उनी अबका नेकपाका केन्द्र बन्दै गएको अवस्था थियो । तर, एक्कासि प्रचण्डलाई कार्यकारीको पगरी गुथाइदिएपछि माधव नेपाल ओझेलमा परे ।
अन्ततः उनी स्वयम् प्रचण्डका पछि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो । र, यही अघोषित तर सूक्ष्म पीडा व्यवस्थापनका लागि पनि माधव नेपालले वामदेवलाई अघि सारेर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
तर, यसो भएमा पनि माधव नेपाललाई भने ‘हात लागी शून्य’ नै हुने देखिन्छ । किनभने वामदेव सत्तामा आए पनि फाइदा नेपाललाई होइन, प्रचण्डलाई नै हुनेछ । र, भैँसेपाटी गठबन्धनको सफलताको जस पनि प्रचण्डकै पोल्टामा पर्नेछ ।
आखिर चेपुवामा वामदेव
नेकपाभित्रको गठजोड र आन्तरिक ‘खुराफात’ केलाउँदा प्रचण्ड, नेपाल र खनालले ‘वामदेव कार्ड’को राम्रै सदुपयोग गरेका देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी देखाएर वामदेवलाई अघि बढाएर ओलीको ‘सेखी झार्ने’ अभीष्ट पूरा गर्ने दाउमा प्रचण्ड–नेपाल–खनाल देखिएका छन् ।
अहिले जुन भैँसेपाटी गठबन्धनको अभीष्ट भनिएको छ– वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा तानेर संविधान संशोधन गरी वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्ने, यो भने पूरा हुने देखिदैन तत्काल । किनभने यही वा विद्यमान संविधानले प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारलाई त्यही अवधिको प्रतिनिधिसभा कायम रहुञ्जेल मन्त्री बन्न दिँदैन । संविधान संशोधनको सम्भावना पनि कम नै छ ।
यही संविधानअनुसार वामदेव, जो यही प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार हुन्, उनलाई मन्त्री हुने बाटो वर्तमान संविधानले दिएकै छैन भने प्रधानमन्त्री बन्न त झनै संवैधानिक बाटो छँदै छैन ।
वर्तमान संविधानको धारा ७८ (१) मा ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । तर, यही धाराको उपधारा (४)मा ‘उपधारा (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनिएको छ ।
यस कारण वामदेवको ‘मन्त्रीमोह’ र ‘प्रधानमन्त्री महत्त्वाकाङ्क्षा’ले तातो पानी पाइसकेको छ ।
यद्यपि, भैँसेपाटी गठबन्धन वामदेवलाई मोहरा बनाएर ओलीलाई कमजोर बनाउन लागिपरेकै छ । उनीहरू कुन हदसम्म सफल हुनेछन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । त्यसो त ओलीको ‘आत्मघाती चतु¥याइँ’ देखियो भने वा माथि भनिएझैँ ‘मेरो हित नभए तेरो किन हित हुन दिऊँ’ भन्ने ओलीलाई लाग्यो भने मुलुक फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वमा फस्नेछ ।
आमजनले स्थायित्व र विकास अनि समृद्धिका लागि एउटै पार्टीलाई स्पष्ट बहुमत दिएर पठाए पनि आमजनको उक्त अपेक्षा पूरा नभएकामा जनतामा निराशा अवश्य छाउनेछ । उक्त निराशाको परिणाम नेकपाको हविगत २०५१ पछिको कांग्रेसकै हुनेछ भने मुलुक पुनः २०५२ सालपछिको द्वन्द्वमा फसेझैँ नफस्ला भन्न सकिन्नँ ।
प्रचण्ड–नेपाल–खनालका अघोषित आग्रह, कुण्ठा र प्रतिशोध साँध्न ‘वामदेव कार्ड’ फालिइरहिएको जबसम्म वामदेव स्वयम्ले बुझ्दैनन्, तबसम्म उनी अनेकौँ पटक अनेक व्यक्ति र समूहका ‘मोहरा’ बनिरहननेछन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन १८, २०७६, ०१:३०:००